Ciyaarta qiimaheedu yahay £100 Million oo maanta dhacaysa - Somgoal
Home Premier league Ciyaarta qiimaheedu yahay £100 Million oo maanta dhacaysa
Waxaa maanta la soo gabogabaynaa horyaalka Premier League oo la ciyaarayo ciyaartii 38aad. Kooxaha aadka isha loogu hayo waxaa ka mid ah ciyaarta dhexmari doonta Leicester City vs Manchester United. Ciyaartan ayaa ah mid u dhiganta £100m maadaama kooxdii soo baxdaa ay iman doonto Champions League-ga. Kooxda Leicester oo garoonkeeda King Power Stadium lagu ciyaarayo ayaa iyadu haysata fursad ay garoonkeeda ku badiso. Halka kooxda Manchester United oo imika kaalinta 3aad fadhida ay rabto inay sii xejisato kaalinteeda.
Haddii ay Manchester United guuleysato waxay baabiinaysaa riyadii Leicester City ee ahayd inay u soo baxdo Champions League-ga. Haddii ay barbar-dhac ku dhammaato ciyaartani, waxay wali rajada Leicester ku xidhantahay ciyaarta kale ee dhex maraysa kooxaha Chelsea vs Wolverhampton Wanderers oo haddiii ay Wolverhampton ka badiso Chelsea ay halkaa Leicester kusoo bixi doonto booska afaraad ee tabeelaha, taasina ay ka dhigayso inay Champions League-ga boos ka hesho sannadka dambe.
Hadaba 90-kan daqiiqo ee qiimihiisu yahay £100million aynu ka war sugno maanta.
Previous articleMessi oo ka mid ah gooldhaliyaasha xilli Barcelona ay guul la soo laabatay.
Next articlePierre-Emerick Aubameyang: Kabtanka Arsenal wuxuu saxiixay qandaraas cusub oo seddex sano ah